Qofku kolka uu khudbad jeedinaayo, ujeedada badanaaba uu ka leeyahay waxaa weeyaan in u fariinta uu xambaarsan yahay gaarsiiyo u gudbiyo dadka isaga dhegeysanaayo. Fariintaasu waxa ay noqon kartaa mid diineed , siyaasadeed ama mid ku saabsan cilmiyada kale ee bulshada. Haddaba suàasha isweydiinta mudani waxay tahay: Sidee ayey khudbadaadu ku noqon kartaa mid si wanaagsan u fulisa ujeedadii aad ka lahayd?
Suàashaas jawaabteeda waxaan ka dhex heli doonaa qodobadaan kooban ee hoos ku qoran.
Waa inaad ugu horeyn si wanaagsan u deristaa dadka ku dhegeysan doonaa nooca ay yihiin. Ma dad waayeel ah ayey u badan yihiin mise dhalinyaro? Aqoonta ay leeyihiin waa mid noocee ah? Guud ahaan maxay xiisaynayaan dadkaas ku dhegeysanaya? Isweydiinta Suàalahani waxaa waxa ay kuu fududynaysaa inaad khudbadaada ku adeegsato erayo ay dadka ku dhegeysanayaa si wacan u fahmi karaan. Taas waxa aan ula jeedaa iyada oo ay inta badan kala duwan yihiin erayada la isticmaalaa hadii lala hadlayo dad aqoon leh iyo hadii lala hadlaayo dad beeraley ah oo aan wax aqoon ah laheyn.
Khudbada aad soo jeedineysaa waa mid ceynkee ah? Ma waxaad dooneysaa inaad gudbiso akhbaar cusub (information)? Mise waxaad dooneysaa inaad dood abuurtid? Mise ujeedadaadu intaas aan soo sheegnayba ma ahee, waxaad dooneysaa inaad wax madadaaliso. Kolkii ujeedada iyo nooca khudbadaadu ay kuu cadaato, waxaad kaloo baaritaan ku sameyneysaa, tusaale ahaan wakhtiga aad hadleysid. Ma waxaad hadli doontaa maalin mise habeen? Gelin hore mise gelin dame? Saacadaha ama daqiiqadaha aad haysataa waa kuwo intee dhan?
Arimahaan aan kor ku soo xusnay oo dhan waxay kuu sahlayaan inaad hadalkaaga si wanaagsan u qorshaysato.
Mowduuca aad ka hadleysaa waa mid sidee ah? Aqoontaada ku saabsan mowduucanse imisa ayey dhan tahay? Waxaa kaloo iyana aad u haboon inaad qorto mawduucaaga adigoo u sameynaayo ciwaan sida: Sidee dagaalka sokeeye ee Soomaaliya u saameeyey dhaqaalaha wadanka? Intaas dabadeed waa inaad raadiso xaqiiq dhab ah oo ku saabsan mowduucaaga. Meelaha aad warbixinta ka raadsan karto waxaa ka mid ah buuggaagta horay loo qoray iyo weliba aaladda Internetka hadii ay taasi suurtogal kuu tahay. Waxaad kaloo warbixin mowduucaaga ku saabsan ka heli kartaa adigoo waraysi la yeelanayo dad xog ogaal u ah arinta aad ka hadleysid. Waxaa kale oo iyana muhiim ah intii aad ku dhexjirtid ururinta akhbaarta inaad eegtid buugaagta aad adeegsaneysid wakhtigii la qoray. Marwalbana waxaad dooraneysaa warbixiniba mida ay ka dameysey. Arintaasi waxay kuu suurto gelineysaa in wabixintaadu ay noqoto mid cusub oo xiiso leh.
Waxaad u sameysaa khudbadaada meel bilow ah, meel dhexe iyo meel dhamaad ah. Taasi waxay dadka ku dhegeysanaayo u fududayneysaa iney si aan hakad lahayn ay khudbadaadii ula socdaan.
Intaas ka dib, isku day inaad tababar wacan ku sameysid khudbadaada. Waxaa aad u wanaagsan hadii ay kuu suurtawdo inaad qof ama dhowr qof ka codsatid iney ku dhegeystaan ka dibna kula socodsiiyaan wixii dhaliil ah iyo wixii kale ee laga bedeli karo khudbadaada. Waxyaalaha kale oo iyaguna muhiimka ah waxaa ka mid ah hadba heerka codkaagu yahay kolka aad hadleysid. Ma waxaa haboon inaad codkaaga waxoogaa kor u qaadid mise waxaa haboon inaad yara gaabiso. Taasi waxay run ahaantii ku xiran tahay hadba meesha aad khudbadaada ka mareysid iyo xaaladaha kale ee kugu meeraysan. Dhaqdhaqaaqa xubnaha kale ee jirka ayaa iyaguna muhiim ah sida gacmaha , lugaha iyo wajigaba.
Kolkaad intaas oo talaabo ee aan kor kaga soo sheekaynay qaadid, waxaa keliya oo kuu harsan inaad tagto halkii aad khudbada ka akhrin lahayd isla markaasna aad soo jeedisid khudbadaadii.
FAAFIN: SOMALITALK.COM | AGOOSTO 12, 2002
Bogga Maqaalada: www.somalitalk.com/maqaal
. GUURKA.&.GURIGA MUSLIMKA
. DHIBAATOOYONKA QURABAHA |
. IS-XISAABI INTAAN LAGU XISAABIN
. AHMIYADDA SALAADDA...
. QORAALADII WARDHEERE
. QORAALADII IBRAAHIM SAALAX..
NOLOSHII SAXAABIGA ABUU DAR AL QHIFAARI
Casharkii 23aad ee Saxaabadii Rasuulka (scw)
Casharkii 33aad ee Siiradii Rasuulka (scw)